लैंगिक समानता र स्वतन्त्रताको अभियानसँगै समानताको अर्थ पुरूषले बच्चा जन्माउनु पर्छ भन्ने हो र ? | Makalukhabar.com
काठमाडौं । मार्च ८ अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस । यस दिवसको आफ्नो गौरवशाली इतिहास छ । संसारभरिका महिलाहरूले गौरव गर्छन् यस दिवसप्रति । यस अवसरमा यस दिवसका मुख्य ब्यक्तित्व क्लारा जेटकिनलगायत संसारभरका संघर्षशील अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु ।
इतिहास साक्षी छ, सन् १९०१ सम्म विश्वभरी कुनै पनि महिलाले मताधिकार पाएका थिएनन् । महिलाहरू आफ्नो घरभित्र दासी, अर्ध-दासीको रूपमा जिउन बाध्य थिए । अधिकार प्राप्तिको संगठित संघर्ष गर्दै जाने क्रममा सन् १९०७ मा जर्मनीको स्टुटगार्डमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन सम्पन्न भयो । यस सम्मेलनले पुरूष समान मताधिकारको प्रस्ताव पारित गर्यो ।
१८ घण्टे श्रम समयलाई १० घण्टामा झार्नु पर्ने, उध्योगभित्र गरिने अमानवीय वातावरणमा सुधार ल्याउनु पर्ने, महिलाहरूले पनि आर्थिक र राजनीतिक कार्यमा सक्रिय रूपमा भाग लिन पाउनु पर्ने जस्ता माँगहरू राखी अमेरिकाको न्यूयाेर्कमा सन् १९०८ देखि १९०९ सम्म महिलाहरूले सशक्त आन्दोलन जारी राखे । यस आन्दोलनको उत्कर्ष दिन थियो ८ मार्च । यस एेतिहासिक दिनको सम्झना र सम्मानको लागि सन् १९१० मा कोपन हेगनमा सम्पन्न दोश्रो अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलनले ८ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक महिला दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गर्यो ।
संसारभरिका महिलाहरूले यस दिवस मनाउन थालेको १०९ बर्ष पुरा भएको छ । एक शताब्दी लामो संघर्षपश्चात पनि लिंगीयलगायत बिभिन्न भेदभाव फरक-फरक रूप र प्रकृतिमा संसारभर कायम छ । नेपालको संविधान- २०७२ ले शब्दमा समान अधिकार सुनिश्चित गरे पनि कर्ममा विभेद जारी छ । संविधानमा जे लेखिएको भए तापनि धर्म, संस्कृति र परम्पराको नाममा महिलामाथि हुने भेदभावलाई समाजले स्वीकृति दिँदै आएको छ ।
कतिपय महिलाहरू छोरी भएर जन्मिएकोमा ठूलो गुनासो छ आफैँप्रति । तर म छोरी भएर जन्मिएकोमा गर्व गर्दछु । किनकि, छोरी भनेका यस श्रृष्टीलाई निरन्तरता दिने सिर्जनाशक्ति भएकी आमा हुन् । भ्रुणदेखि नै छोरीहरूमाथि गरिने भेदभावजन्य ब्यबहारले उनीहरूको शारीरिक र मानसिक बनोटमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्न जान्छ । म अनुरोध गर्न चाहन्छु-"आमाहरू ! भ्रुणदेखि नै अन्याय नगर्नुस् छोरीहरूमाथि । छोरीप्रति गर्व गर्नुहोस् र छोरासरह ब्यबहार गर्नुहोस् ।"
कानुनले बर्जित गरे पनि बाल बिबाह र बहुबिबाह अहिले पनि समस्याको रूपमा रहेको छ । बिशेष गरी मधेसमा दलित समुदायभित्र बाल बिबाहको समस्या चर्को छ । शिक्षा, सामाजिक चेतना र आर्थिक विपन्नताको कारण यो सब भइरहेको छ, मधेसका दलित बस्तिहरूमा । राज्यले बिशेष कार्यक्रम बनाई यस्ता बिकृति रोक्न पहल गर्न जरूरी छ ।
अर्कातिर घरपरिवारको प्रतिष्ठाको निम्ति इच्छाविपरित जबर्जस्ती बिबाह गरिदिनु गर्ने समस्याबाट अहिले पनि नेपाली छोरीहरू प्रताडित छन् । बिबाह अरू कसैको प्रतिष्ठाको निम्ति नभएर आफ्नो लागि गर्ने हो । तसर्थ, सम्बन्धित ब्यक्तिलाई बैबाहिक अधिकार दिनु पर्दछ । परम्परा, धर्म, संस्कृतिको नाममा बिधवा बिबाह समाजमा बर्जित जस्तै छ । मेरो बिचारमा बिधवा बिबाहलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ । किनकि, एउटी नारी समाजमा खुलेर हाँस्न र बाँच्न पाउँदा त्यस समाजको प्रतिष्ठा उच्च हुन्छ ।
प्रखरता, बौद्धिकता, कुशलता आदि गुणलाई वेवास्ता गरी रुप, रंग, यौवन, उचाँइका आधारमा जाचिँरहेका छन् नारी ! युगौदेखि नारी केवल शरीरका माध्यमबाटै चिनिइरहेका छन् !
समस्याको अनुहार वदलिएका छन् ! तर मूलस्वरुप जस्ताको तस्तै छ ! न बलात्कार कम भएको छ, न त अत्याचार र हत्या हिँसा नै बन्द भएको छ ! आखिर कहिले हुन्छ नारीका समस्याको समाधान ? समस्याहरु , प्रश्नहरु दिनप्रतिदिन थपिरहेका छन् तर समाधान एवं उत्तर भने सदियौदेखि वेपत्ताका वेपत्तै छन् !
के हरेक वर्ष मार्च ८ तारिखका दिन महिला दिवस मनाएर मात्र समस्याको समाधान होला त ?
लैंगिक समानता र स्वतन्त्रताको अभियानसँगै निरपेक्ष समानता र स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने विकृति पनि समाजमा बढ्दै गइरहेको छ । समानताको अर्थ पुरूषले बच्चा जन्माउनु पर्छ भन्ने हुनसक्दैन । किनकि प्रकृतिले त्यो अधिकार महिलालाई मात्र दिएको छ । हुनत आजकल विज्ञानले लिंग परिबर्तनदेखि टेस्टट्यूव बेबीसम्मलाई सम्भव बनाएको छ । तर त्यो प्रकृतिको आम कार्यविभाजनको बिरूद्धमा प्रयोग गर्न संभव छैन । त्यसैले समानताको अर्थ अवसरमा समानता हो, अवसरको उपभोगमा समानता हो ।
अझै पनि हाम्रो संविधानमा नारी-पुरूषबीच विभेद छ । हुनत अहिले हाम्रो देशको राष्ट्रपति महिला हुनुहुन्छ, यो गर्वको कुरा हो । तर समग्र महिलाहरूको मुक्ति र स्वतन्त्रता केही महिला महत्वपूर्ण पदमा पुगेर मात्र हुँदैन । त्यसको लागि प्रणाली र संरचनामै परिबर्तन ल्याउनु जरूरी छ ।
महिला र पुरूष रथका दुई पांग्रा हुन् । पुरूषप्रति बदलाभाव राखेर वा महिलालाई हेपेर समानता संभव छैन । तसर्थ, एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्दै सहयात्रा गरौं । अनि कायम गरौं नारी-पुरूष समानता ।
यस ऐतिहासिक दिनको अवसरमा सबैलाई हार्दिक शुभकामना !
यस्ता छन् आजका विभिन्न पत्रपत्रिकामा छापिएका समााचार